I-automatic Soap Dispenser Wall Mount
Ikhaya / Amanzi okugeza / Izinzwa zokugeza ompompi / WOWOW okuzenzakalelayo Insipho Idivaysi ekhipha Wall Mount
Ukwehla izinga lokutheleleka kwe-COVID-19, hhayi nje ukuthi udinga ukugeza izandla ngenkuthalo kodwa futhi udinga isisulu sensor sensor sensorer ukuze wehlise ithuba lokutheleleka
Ukuqubuka kweCOVID-19 kwenza abantu kufanele banake inkinga yokugeza izandla. Abasakazi bepompo bendabuko badinga ukuthinta ikhanda lepampu ngesandla, lokho okwandisa amathuba okutheleleka ngegciwane. Ikakhulu ezindaweni zomphakathi ezinjengezindlu, izikole, izitolo ezinkulu zokuthenga, izindawo zokudlela kanye neziteshi, abantu abaningi kudingeka baye endlini yangasese, Ngalesi sikhathi, isisebenzisi sensipho sokuhlanza sensor sitholakala kalula. Vele ubeke isandla sakho ngaphansi kwesitsha sokuhambisa insipho, izokhipha ngokuzenzakalelayo ikhambi lensipho, inciphise ukuthinta, ivikele nempilo yabantu. Sebenzisa ubuchwepheshe besimanje ukunqoba i-COVID-19. Ukuqala ngokugeza kahle izandla, isisulu sokuzenzakalelayo sensipho sivikela abantu kumagciwane
I-SKU: I-othomathikhi Yensipho Yokusabalalisa Categories: Izinzwa zokugeza ompompi, Amanzi okugeza Tags: Izindlu Zokugeza Zentengiso, Insipho Yensipho, Inzwa ye-infrared, Insipho Yotshwala